राजीनामा नआएसम्म अनशन तोड्दिन: डा. केसी
Wednesday, 01 April 2015 11:48
काठमाडौं– विभिन्न दश सुत्रीय माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले पदाधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म अनशन कुनै पनि हालतमा नतोड्ने बताएका छन्।पदाधिकारीकाकै कारण आफू पटक पटक अनशन बस्नु परेको भन्दै डा. केसीले पदाधिकारीको राजीनामा नआएसम्म अनशन जारी राख्ने बताए। 'मैले विगत पाँच पटकसम्म अनशन बस्नुको पछाडि पदाधिकारीकै हात छ,' केसीले नागरिकन्युजसँग भने,'अब पनि फेरि अनशन बस्ने गरी कुनै सम्झौता हुँदैन। पदाधिकारीको राजीनामा नआएसम्म अनशन तोड्दिन।' उनले पदाधिकारीको राजीनामा नआएसम्म प्राण त्याग्ने अनशन नतोड्ने बताए।
यसैबीच डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। उनलाई निरन्तर अक्सिजनमा राखिएको छ। छातीको दुखाइका कारण अक्सिजन तान्नसक्ने क्षमतामा कमी आएको छ। केसीको मुटुको धड्कनमा गडवढी देखापर्न थालेकाले तत्काल आइसियुमा सार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डा.विद्यासिंह साहले बताइन।
More in this category: « कानून नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सरकारको निर्णय	डा.केसीले अनशन ताेड्दै »